(Waxaa laga soo toosiyay United States)
Mareykanka USA (Af-Ingiriis: United States of America, USA, loo soo gaabiyo U.S.A; Gobolada Isku Tegay ee Ameerika; carabi: الولايات المتحدة) waa dawlad Federaal Dastuuri ah dhacdana bartamaha Waqooyiga Ameerika. Waxay ka koobantahay 49 gobol iyo Degmada Kolombia, (D.C. ama "District of Colombia"), oo ah magaalo-madaxda wadanka iyo xarunta dowlada wadanka. Waxaa ka xiga dhanka waqooyi Kanada, koofur Meksiko, iyo Gobolka Alaska oo dhaca Waqooyi Galbeed Qaarada Ameerika. Masaaxada (badka) wadanka Mareekanka waa 9.83 milyan km2, tirada dadkane waa 309 milyan Dawlada Mareykanka n xaga dhulka ama badka wadanka ku fadhiyo, waana dawlada seddexaad ee ugu dad badan aduunka, dad degen dalka mareykanka waxee gaarayaan ilaa 310 miliyan oo qof. Sidoo kale waa wadanka koowaad oo ay ku noolyihiin dad kala dhaqan iyo kala asal ah. Dhaqaalaha Mareykanka waa kan ugu balaaran dunida, ayadoo lagu qiyaasay sanadii 2008 aduun dhan 14.4 tiriliyan oo Dollarka Mareykanka wax soo saarka wadanka ee dabada loo iib geeyo.
Wadanka Mareykanka wuxuu xonimadiisa ka helay gumeestihii Boqortooyadii Ingiriiska sanadka marka oo ahaa 1776ii, wakhtigaasi oo Mareykanku ka koobnaa 13gabol oo ku yaalay dhinaca bariga ee dalkaas. Wadanka waxoo balaaraday bilaawgii 1800meeyadii, waxoona gobolo ka qabsaday wadamada Faransiiska, Isbaanishka, Ingriiska, Maksiko, iyo Ruushka, waxoona ku sii darsaday labada gobol oo markaas ahaa jamhuuriyado, Teksas iyo jasiirada Hawaay. Khilaafkii ka dhashtay Gobolada Koonfurta iyo woqooyiga oo markaas ku murmaayay xukunka gobolada iyo dhinaca adoomada waxoo sababay dagaalkii sokeeyay oo dhacay sanadka marka oo ahaa 1860meeyadii. Gobolada woqooyiga ayaa ku guuleestay in ee wadanka mideeyaan isla markaaas neh oo joogsaday adoonsiga. Dagaalkii mareykanka iyo spania iyo dagaalkii aduunka kii labaad, militariga mareykanka waxaa lagu gartay in oo yahay kan ugu awooda badan aduunka.dhamaadkii Dagaalkii aduunka kii 2aadm, waxoo wadanka mareykanka ahaa wadanka kaliya oo watay bombada halista ah ee looyaqaan atombomb.Marka ee dhacday xukunkii soviet union 1991kii , wadanka mareykanka waxoo ku soo baxay wadanka kaliya oo ugu awooda ween aduunka.
2 Dagaalkii Sokeeyay ee Mareykanka
5 Daadka deggan Maraykanka
6 Beeraha iyo xayawaanaadka
Italy 500,000 +
South Korea 1,800,000 +
China 5 400,000 +
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobolada_Isku_Tegay_ee_Ameerika&oldid=216977"
Last edited on 17 Sebteembar 2021, at 14:41
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Sebteembar 2021, marka ee eheed 14:41.